सुनको भाउ आज तोलामा ८ सय रुपैयाँ बढ्यो | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असोज ९, २०७७ शुक्रबार १०:५१:१४ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डाै - सुनको भाउ आज तोलामा ८ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
भाउ बढेर सुन आज तोलाको ९३ हजार ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो तोलामा एक हजार २ सय रुपैयाँ घटेर सुनको भाउ तोलाको ९३ हजार १ सय रुपैयाँ थियो । समग्रमा यो हप्ता सुनको भाउ तोलामा ३ हजार एक सय रुपैयाँ घटेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नाफा सुरक्षित गर्नको लागि सुन बिक्रीमा आएपछि भाउ घट्दै गएको महासङ्घ अन्तर्गतको भाउ निर्धारण समितिका संयोजक तेजरत्न शाक्यले बताउनुभयो । तर आज सुनको भाउ घटे पनि डलर मजबुत हुँदा नेपालमा भाउ बढेको हो ।
यस्तै चाँदी आज तोलामा ४० रुपैयाँ बढेको छ । चाँदी आज तोलाको एक हजार १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ ।
Sept. 25, 2020, 11:26 a.m.
सून को भाउ अझै धेरै माथि सम्म बडाेस भन्छु म त, कारन छ कि, हाम्रा नेपाली चेली हरु सून को गहना भने पछि किन तेत्ती साह्रै हुरुक्कै ? अनि, ऐले को समय कत्ती खराब छ ? तेस्तै पर, जिउ-ज्यान जान पनि कुनै बेर लाग्दैन ! भने पछि, तेस्तो खाल्को समय अनि महङ्गो हुदा-हुँदै पनि, अति नै क्रेजी हुदा हस्बेन्द लाई कत्ती साह्रो-गाह्रो पर्न जान्छ ! तेसैले हुन सक्छ, कर्मचारी देखि नेता सम्म ले घुसपैठ र भ्रस्टाचार भयको सत्ते हो ! भनेर ठोक्कुवा साथ भन्न सकिन्छ ! नत्र त, दुई छाक खाना र एक्सरो लुगा अनि अलिकती एक्स्त्रा क्रेडिट गर्न जो-सुकैले सकिन्छ ऐले को समय मा ।